Boeing oo sawir gacmeed ka sameysay diyaarad inta ay ku jirtay duulimaad tijaabo ah | War gadget
Qaadashada duulimaadyada dhaadheer ee tijaabada ah waa inaysan noqon waxa ugu raaxada badan adduunka. Si kastaba ha noqotee, taasi waa waxa hal-abuurka u jira. Tanina waa tan ay Boeing isku dayday inay ku sameyso mid ka mid ah diyaaradaha ay tijaabiso. Boeing 787-8 oo wata matoorka Rolls-Royce Trent 1000.
Duulimaadka tijaabada wuxuu ka koobnaa waxqabad safar qaatay 17 saacadood. Marka kooxdii imtixaanku waxay u soo degeen inay shaqeeyaan waxayna soo saareen mid ka mid ah jidadka ugu xiisaha badan ee waqtiga oo dhan: waxay doonayeen inay shaabadeeyaan sawirka diyaaradda ay ku tijaabinayeen cirka Mareykanka oo dhan, oo ah nooc sidoo kale loo yaqaan ' Dreamliner '.
Codsiga FlightRadar ayaa mas'uul ka ahayd bixinta digniinta hore. Codsigani wuxuu diiwaangeliyaa dhammaan waddooyinka duulimaadyada ee firfircoon xilligaas wuxuuna calaamadeeyaa dhammaan taariikhda isku mid ah. Isla sidaas oo kale ayaa dhacday Ogosto 2 duulimaadkii tijaabada BOE004.
Wadadu waxay ka bilaabatay Seattle iyadoo 17 saacadood ee duulimaadka ay sii martay 22 gobal. Sidoo kale, Boeing sidoo kale waxay ka tagtay war-saxaafadeedkeeda gaarka ah kaas oo ay ku sharaxday wax yar oo dheeraad ah meelaha muhiimka u ah safarkan. Marka waxaan kuu sheegi karnaa in sanka diyaaradda uu farta ku fiiqayo xarunta shirkadda Boeing lafteeda oo ku taal Marinka Puget. Halka baalasha ay ka baxaan waqooyiga Michigan illaa xadka Canada. Ugu dambayntiina, safku wuxuu ku yaal gobolka Alabama.
Hadda, FlightRadar waxay kaloo faallo ka bixisay in aysan ahayn markii ugu horreysay ee dhiseyaasha Boeing ay cirka ku yeeshaan hal abuur. Oo isagu wuxuu caddeyn ka siiyay duulimaadyo taas ah waxay sawireen magaca 'Max' ama waxay dhaheen 'Hello' —'Hello 'oo Ingiriisi ah— dhammaan daawadayaasha ka warqabay jidadka kala duwan.
Si aan u dhammaystirno, waxaan kuu sheegi doonnaa in qaabkan diyaaradda ah, Boeing 787-8 waxay gaari kartaa xawaare sare 950 km /h. Bilaabashadiisu waxay soo bilaabatay 1996 waxayna qaadi kartaa in ka badan 300 oo rakaab ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Boeing ayaa sawir gacmeed ka sameysay diyaarad inta ay ku jirtay duulimaad tijaabo ah